Ku daabac sawirada meelkasta oo daabacan pint-ka cabirkiisu hooseeyo qiimo aad u sareeya - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Ku daabac sawirada meelkasta oo daabacan pint-ka lagu cabbiro oo cabirkiisu hooseeyo qiimo aad u sareeya - BGR
Ku daabac sawirro meelkastoo daabacaaddan pint-ka ah ee cabbirka leh ee qiimaha weyn leh - BGR
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu sawiro ku wadaago Instagram ama Facebook, laakiin mar haddii ay suurta gal tahay in sawir la qaado, ku daabac waraaqda sawir dhab ah oo nolosha la wadaago. Haddii aad raadineyso dib-u-madadaalo ama aad leedahay dad noloshaada ku jira oo aan ku jirin GI (Ilaah ha naga fogeeyo!), Waxaa jira qalab weyn oo kuu oggolaanaya inaad dib u dhigto sixirkii hore. Magaciisu waa Daabacaha Kodak Dock iyo Wi-Fi Portable 4 × 6 inji wuxuuna la shaqeeyaa iPhones iyo sidoo kale taleefannada Android.
Waa kan kookaha bogga sheyga:
HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO: Qalabka daabacaadda ku habboon ayaa kuu oggolaanaya inaad sawirro toos ah kaga daabacato taleefankaaga casriga ah; Waxaa ka mid ah pin tabinta Android iyo hillaac macruufka macruufka ah oo bilaash ah
Muuqaal sarreeya oo sawir leh: daabacado nidaamyo fudud oo dhakhso leh, sawirro dhexdhexaad ah oo loo yaqaan '4 inji' oo leh inji dhexro ah '6 inji' oo leh midabyo firfircoon iyo faahfaahinno yaab leh; Tiknolojiyadda wareejinta kuleylka D2T2 ma dhiigbax doonto mana jabsan doonto
XIDHIIDHKA KARAAMADA KARAAMADA: Micro USB 5 pin pin function for Android iyo USB host for daabacaadda iPhone, iPad, camera digital or USB stick - Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho kaliya daabacadda oo leh awood-bixiyeyaasha korantada la keeno (Quwadda korantada - 24 V 2,5 A)
LUUQADAHA FARSAMADA: Daar laba aaladood oo caqli badan inta aad sugeyso; Qaadashada Unique waxay siisaa lacag deg deg ah guriga, xafiiska, iskuulka ama ganacsiga
Barnaamijka bilaashka ah ee loo yaqaan 'COMPANION APP': Ka soo degso barnaamijka Kodak Photo Printer app ee shaandhaynta, dhejiyadaha, qaab dhismeedka kaarka, abuurista isku-dhafan, fiidiyoowga iyo SNS, iwm.
@BGRDeals on Twitter si aad u raacdo dalabyada ugu dambeeyay ee shabakadda. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Apple's 300 Beats Solo3 waxaa loo yareeyay 160 $ mid ka mid ah midabada ugu wanaagsan ee aad heli karto - BGR
Amazon ayaa hadda hoos u dhigtay 200 $ qiimaha Roomba 960-robot vacuum nadiifiye sare leh oo leh nadiifiye leh - BGR